Wararkii ugu dambeeyey dagaalada Hiiraan & dhinacyada diriraya oo hadley (Dhageyso) – SBC
Wararkii ugu dambeeyey dagaalada Hiiraan & dhinacyada diriraya oo hadley (Dhageyso)
Warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya dagaallo aad u culus oo lagu hoobtey oo shaley ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, kuwaasi oo u dhaxeeyey xoogaga Shabaabka & Ururka Ahlu Sunna Waljameeca oo taabacsan dawlada KMG ah.
Dagaaladan ayaa la soo sheegayaa inay ka dhaceen deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanada Hees & Dhiirame, iyadoo dagaaladaasi la isku adeegsadey noocyada kala duwan ee hubka.
Warar SBC ka helayso dad wargal ah oo ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ka gaabsadey in magacooda saxaafada laga xuso sababo xasaasiyada wararkani leeyahay ayey sheegeen in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen dagaaladaasi halka tiro ka badan 30 ay ku dhaawacmeen.
Dagaaladan ayaan ilaa iyo haatan la soo sheegin guulo ay kala gaareen dhinacyada dagaalamaya waxaana la soo sheegayaa in dhinacyadii dagaalamay ay isku horfadhiyaan goobaha lagu dagaalamay.
Dhinacyada dagaalamaya ayaa kala sheeganaya guulo ay ka gaareen dagaalkaasi inkastoo ilaa iyo haatan aynan helin cadeymo rasmi ah oo muujinaya guulo dagaalkaasi hal dhinac ka gaareen.
Afhayeen u haldey xarakada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Sheekh C/casiis Abuu Muscab ayaa sheegtey in dagaaladii ka dhacay deegeenadaasi ay guulo ka gaareen dhinacooda, waxaana uu sheegay in ay jab weyn u geysteen dhinaca ka soo horjeeda ee Ahlu Sunna Waljameeca.
“Muslimiinta waxaan ugu bishaareynayaa in laga adkaaday maleeshiyaad mushrikiin ahaa oo doonayay in ay qasaan ku dhaqanka shareecada Islaamka ee wilaayada Hiiraan ka hana qaaday, Deegaanka Hees ayay mujaahidiintu daadiyeen bakhtiga maleeshiyaadka cadawga ee gaalada u adeega waxaana degmada Matabaan u firxaday maleeshiyaadkii Hees laga Eryay”. Ayuu yiri Abuu Muscab oo saxaafada la hadley. (Player-ka hoose ka dhageyso hadalka afhayeenka Shabaabka) Dhageyso afhayeenka Shabaabka
Afhayeenka Ahlu Sunna
Dhinaca kale Afhayeenka Ahlu Sunna Wal-Jamceeca Sheekh C/raxmaan Sheekh C/laahi (Abuu Yuusuf Al Qaadi) oo saxaafada la hadley ayaa isaguna geestiisa sheegay in dagaaladaasi ay iyagu ku guuleysteen oo ay qabsadeen goobihii lagu dagaalamay, isla markaana dhinaca ka soo horjeeda jab weyn u geysteen.
“In ka badan 30 meydka khawaarijta oo ay ka mid yihiin horjoogayaashoodii ayaan ku dilney dagaalka, bakhtigoodina wuxuu daadsan yahay deegaanada lagu dagaalamay, haatana waxaan sii baacsaneynaa firxadkodii” ayuu yiri afhayeenka Ahlu Sunna.(Player-ka hoose ka dhageyso hadalka afhayeenka Ahlsu Sunna) Halkan ka dhageyso afhayeenka Ahlsu Sunna
Dagaalo kale oo dhimasho & dhaawac sababay ayaa iyaguna ka dhacay deegaano kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan sida Ceel-Gaal, Buurta Qawleyd & garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne.
Dagaaladan ayaa u dhaxeeyey xoogaga Shabaabka & ciidamada maamuulka Dooxada Shabeele, iyadoo dagaaladan ay daba joogaan xiisadaha colaadeed ee salka ku haya gacan ku haynta gobolka Hiiraan.
Maamulka Al-Shabaabka ee magaalada Baladweyne ayaa shaley magaalada Baladweyne ku soo bandhigey meydadka rag ay sheegeen inay ku dileen dagaaladaasi, waxaana meydadka oo la soo dhigay bartamaha magaalada ku soo xoomay dadka magaalada Baladweyne.
Yuusuf Axmed Hagar (Daba-geed) oo horey u ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan haatana ka mid ah saraakiisha maamulka dooxada Shabelle ayaa sheegay in dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada Baladweyne ay guulo ka gaareen oo ay jab weyn u geysteen maleeshiyada Al-Shabaab, sida uu sheegay.
Wararkii ugu dambeeyey ee saaka deegaanadaasi naga soo gaaraya ayaa sheegaya in xiisado dagaal & abaabul coladeed laga dareemayo guud ahaan deegaanadii lagu dagaalamay, waxaana laga cabsi qabaa in dagaaladu ay mar kale maanta dib u qarxaan maadama la isku horfadhiyo goobihii lagu diriray.